January 6, 2021 - Achawlaymyar
January 6, 2021 by Achawlaymyar
အအေးဗူးတွေ ဘီယာဗူး တွေဖောက်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်ကိုမဖြစ်မနေသတိထားပါ
အသက်ကိုဉာဏ်စောင့်တယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းသင့်အနေနဲ့မဖြစ်မနေသိထားသင့်ပါတယ်။ တခါတလေ အင်တာနက်သုံးနေရင်းနဲ့ရူးကြောင်ကြောင်သတင်း တွေ့ဖူးကြမှာပါ ဘယ်လိုမျိုးတွေလည်းဆိုတော့ မိသားစု အကုန်လုံး soda ဘူးဖောက်သောက်ရင်းအဆိပ်သင့်သလိုဖြစ်ပြီး သေသွားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလိုမျိုးပေါ့။ ဒါပေမယ့် အခုပြောပြချင်တာက တကယ်သေနိုင်လား? မသေနိုင်ဘူးလား?မသေဘူးဆိုရင်ကောဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်လည်း? ဘယ်လိုရှောင်ကျဉ်သင့်သလည်း?ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုလောက်မေးကြည့်ချင်ပါတယ်။ရိုးရိုးသားသားဖြေကြတာပေါ့။အိမ်ကနေအဝေးရောက်နေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ သံဘူးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အအေးတွေ၊ဆိုဒါတွေ၊ဘီယာဘူးတွေကိုသောက်တဲ့အခါမှာ ဒီအတိုင်းဖောက်ပြီးတော့ သံဘူးနဲ့ဘဲသောက်ဖြစ်ကြပါသလား?မဖောက်သောက်ခင်တုန်းက မသန့်ရှင်းမှာစိုးလို့ဆိုပြီး မျက်နှာပြင် တဝိုက်ကို Tissue နဲ့သုတ်မိကြပါသလား?အဲ့လောက်နဲ့သန့်ရှင်းသွားပြီလို့ထင်လိုက်ပါသလား? ကဲ အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအတွက် အဖြေတွေကိုအောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။သံဘူး တွေအကုန်လုံးကို စက်ရုံ ကနေထုတ်လိုက်ပြီဆိုကတည်းက ပလတ်စတစ်တွေနဲ့ထုတ်ပိုးထားခဲ့ပါတယ် ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အခြား ဖုန်တွေ အညစ်အကြေးတွေမတက်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအနေအထားအတိုင်းဘဲ စူပါမားကတ်တွေကိုပို့ဆောင်ပါတယ်။သံဘူးတွေဟာ စူပါမားကတ်တွေရဲ့ အရောင်းစင်တွေမှာရက်ပေါင်းများစွာ ရှိနေတာကြောင့် အချို့သောဖုန်တွေတက်နေနိုင်ပါတယ် ဒါကြောင့် မသောက်ခင်မှာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတာအကောင်းဆုံးပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် အမှန်တကယ်ကတော့ သံဘူးတွေအရမ်းညစ်ပတ်နေလို့ဆိုပြီး ဆပ်ပြာမှုန့်တွေသုံးပြီးတိုက်ချွတ်ဆေးကြောတာကတော့ လုံးဝမလိုအပ်တဲ့နည်းလမ်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပါ၊ နောက်တစ်ခါ သံဘူးတွေကို ဖွင့်သောက်တော့မယ်ဆိုရင်အခုပြောမယ့်အချက်လေးတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးပါ။ … Read more
ယောက်ျားလေးများ အမြတ်တနိုးယူသင့်သော မိန်းကလေး (၁၀) မျိုး
(၁). အနာရောဂါကင်းရှင်းပြီး အနေအထိုင်သိမ်မွေ့သန့်ရှင်းသော မိန်းကလေး (၂). မိဘ အား ပြုစုလုပ်ကျွေး လိုစိတ် ရှိပြီး ကိုယ့်ထက် အကြီး များအား လေးစားစွာ ဆက်ဆံ တတ်ပြီး ကိုယ့်ထက် အငယ် များအား အရာရာ နားလည် ထိန်းကျောင်းပေး တတ်သော မိန်းကလေး… (၃). ပုံမှန်အားဖြင့် ယောကျာ်းလေး ဆို စိတ်မ ဝင်စားတတ်..ကိုယ်နဲ့တွေ့မှ အိမ်ထောင်ပြု ခြင်း လက်ထပ်ခြင်း အမှုကို စဉ်းစားဖြစ်သော မိန်းကလေး (၄). အရာရာကို လွယ်လွယ် မယုံ ဉာဏ်နဲ့ယှဉ်ကာ ဆုံးဖြတ်လုပ် ကိုင်တတ်သော မိန်းကလေး ထို အသိဉာဏ် အတွေ့အကြုံ လောကအမြင် များကိုလဲ သားသမီး များအား သွန်သင် လမ်းညွှန်ပြနိုင်သော မိန်းကလေး… (၅). … Read more
သင်ညအိပ်ရင် ဘယ်ဘက်ကို စောင်းအိပ်တတ်တဲ့ သူတစ်ယောက် ဆိုရင်တော့ ထီပေါက်တာထက် ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိသွားပါပြီဘာကြောင့် ဒီလိုမေးရသလဲဆိုတော့ သင်ရဲ့အိပ်စက်ပုံဟာ သင်ရဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ် ကျန်းမာရေးအတွက် အရမ်းကိုအရေးတကြီး ပတ်သက်နေလို့ပါပဲ အကယ်၍ သင့်အနေနဲ့ ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်လေ့မရှိရင်တော့ အခုဖော်ပြသွားမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို အဆုံးထိဖတ်ကြည့်ရင်း ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်ဖို့ သင်ကြိုးစားလာပါလိမ့်မယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်ဘက်သို့စောင်းအိပ်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေနဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ အခြားသောအရာဝထ္တုတွေကို ခန္ဓာကိုယ်ကနေ ဖယ်ရှားသွားအောင် ကူညီပေးနိုင်လို့ပါပဲ ဒီလို ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အညစ်အကြေးတွေသာမက ဦးနှောက်ထဲက ဓာတုအညစ်အကြေးတွေကိုလည်း ဘယ်ဘက်စောင်းအိပ်ခြင်းဖြင့် ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ သင့်ဆီမှာ နှလုံးပြဿနာရှိနေမယ်ဆိုရင် ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်ခြင်းက သင့်ကိုကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်ခြင်းက နှလုံးသွေးလည်ပတ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ရင်ပူခြင်းဝေဒနာ ခံစားနေရသူတွေအနေနဲ့လည်း ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ညာဘက်ကိုစောင်းအိပ်ခြင်းက ဒီဝေဒနာကို ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်ပြီး ဘယ်ဘက်ကို … Read more
လူတိုင်းဟာ အချစ်ဦးနဲ့ လက်တွဲခွင့်မရတတ်ကြပါဘူး။ အချစ်ဦးတင်မဟုတ်ပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ အချစ်ဆုံးဆိုသူတွေနဲ့လည်းကွဲကွာတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုကွဲကွာတဲ့အခိုက်အတန့်မှာ ခံစားရတဲ့ဝေဒနာမျိုးဟာ ပြောမပြတတ်လောက်အောင်နာကျင်ရပါတယ်။ အချို့သူတွေကတော့ နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာ အနည်ကျသွားပေမယ့် အချို့သူတွေကတော့နှစ်တွေအများကြီးကြာသွားတာတောင် အနည်မထိုင်ပဲရှိနေတတ်ပါတယ်။ အသဲကွဲခြင်းက ရေရှည်ဖြစ်နေပြီး မိမိကိုယ်ကို လွင့်ချင်ရာလွင့်ပါစေဆိုပြီး မျှောထားတဲ့လှေတစ်စင်းလိုပြုမူနေရင်တော့ သင့်ဘဝကို အမြန်ဆုံးပြုပြင်သင့်ပါပြီ။ အောက်ပါအချက်တွေက သင့်ရဲ့အချစ်ရဆုံးကို ချက်ချင်းကြီးမေ့အောင်တော့ မကူညီနုိုင်ပေမယ့် အချိန်အမြန်ဆုံးမေ့အောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာတော့ ကူညီပေးနုိုင်ပါလိမ့်မယ်။ (၁) ပထမဆုံးသင်သတိရဖို့က အချိန်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာပါပဲ။ သင့်ရဲ့အချစ်ဆုံးကို ဘယ်လောက်ကြာရင် မေ့နုိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီး ပုံသေကြီးချမထားပါနဲ့။ ဒီအချက်ကသူ့ကိုပိုပြီးသတိရစေပါတယ်။ အချိန်ကတဖြည်းဖြည်းကုစားသွားမယ်ဆိုပေမယ့် အဲ့ဒိအချိန်ဆိုတာကြီးကို ခဏခဏခေါင်းထဲမရောက်ပါစေနဲ့။ သင်ကအချိန်ကာလာအကန့်အသတ်ပေးထားရင် အချိန်ပြည့်လို့ မမေ့နုိုင်သေးရင် ပိုပြီးတော့တောင် သူက စိတ်ထဲရောက်လာနုိုင်ပါတယ်။ အခုကစပြီး အချိန်ကာလအကြောင်းက ခဏမေ့ထားပါ။ (၂) အပြည့်အဝနာကျင်လိုက်ပါ။ အသဲကွဲရင် ရင်ကွဲမတတ်ခံစားရတာ သင်တစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ပါဘူး။ ရင်ဘတ်ထဲ ဘာလိုလို့လိုနေမှန်းမသိခြင်း၊အထီးကျန်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ … Read more
လက်ဝဲ လက်ယာမဟုတ်သော အသားလှုပ်နိမိတ်အဟော
လက်ဝဲ လက်ယာမဟုတ်သော အသားလှုပ်နိမိတ်အဟော။၁။ ကျောကုန်းလှုပ်မူ အဝတ်ရမည်။ ၂။ ကိုယ်လှုပ်မူ မယားနှင့်အတူ စကားဆိုရမည်။၃။ ခါးလှုပ်မူ ဥစ္စာပျောက်မည်။၄။ ချက်လှုပ်မူ နှစ်လိုဖွယ်သော ဥစ္စာရမည်။ ၅။ထိပ်လှုပ်မူ မင်းပူဇော်ခံရမည်။၆။ နှာခေါင်းလှုပ်မူ ချစ်သူများမည်။၇။ နှလုံးသားလှုပ်မူ ခင်ပွန်းကောင်းတစ်ယောက် ဥစ္စာပေးလာမည်။ ၈။ မေးဖျားလှုပ်မူ အချင်းများမည်။၉။ လည်ပင်းလှုပ်မူ တန်ဆာဆင်ရမည်… ၁၀။ အထက်နှုတ်ခန်းလှုပ်မူ ရန်ဖြစ်မည်။၁၁အောက်နှုတ်ခန်းလှုပ်မူ အဝေးစကားပြောကြားရမည်။ ၁၂။ အင်္ဂါဇာတ်လှုပ်မူ မယားနှင့်စကားများမည်။ ဥစ္စာရမည်။၁၃။ ဦးခေါင်းလှုပ်မူကျွန်ဖြစ်မည်။ ၁၄။ ဦးရေလှုပ်မူ နာဖျားမည်။လက်ယာအသားလှုပ်နိမိတ်အဟော။၁။လက်ယာဦးကင်းလှုပ်မူလာဘ်ရမည်။ ၂။လက်ယာ မျက်ခုံးလှုပ်မူ လာဘ်ရမည်။ ခင်ပွန်းပူဇော်မည်။၃။လက်ယာအောက်မျက်ခမ်းလှုပ်မူ ချစ်သူတွေ့မည်။၄။ လက်ယာနား လှုပ်မူမျက်လိုရမည်။ မိန်းမ မကောင်းကြံခြင်းခံရမည်။ ၅။ လက်ယာနှုတ်ခမ်းလှုပ်မူ ချစ်သူနှင့် စကားပြောရမည်။၆။ လက်ယာပါးလှုပ်မူ ချစ်သူကို တွေ့ရမည်။ ၇။ … Read more
ဝက်ခြံ ၊ ဆားဝက်ခြံ နှင့် ချွေးပေါက် ကျယ်တာတွေအတွက် အစွမ်းထက် ခရမ်းချဉ်သီးနည်းလမ်း
ခရမ်းချဉ်သီးမှာ မြင့်မားစွာပါဝင်တဲ့ lycopene ဓါတ်ဟာ အရေပြားအတွက် အထူးပင်ကောင်းမွန်မှု ရှိပါတယ် ။ ဒါေ့ကြာင့် အသားအရေလှချင်ရင် ခရမ်းချဉ်သီး များများစားပါလို့ ပြောကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ခရမ်းချဉ်သီးဟာ အရေပြား အတွင်းရော အပြင်ကိုပါ ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ် ။ မျက်နှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ဝက်ခြံ ၊ ဆားဝက်ခြံတွေကို အထူးပျောက်ကင်းစေနိုင်ပြီး ချွေးပေါက်ကျယ်တွေကိုလည်း ကျဉ်းစေနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ် ။ မျက်နှာ အသားအရေကိုလည်း ပိုပြီး ဖြူလာစေပါတယ် ။ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ အရေပြားဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ ကြည့်ရအောင် .. ၁။မျက်နှာအသားအရေ ကြည်လင်ဖြူဖွေးဖို့အတွက် ခရမ်းချဉ်သီး နှင့် သကြား ပထမဦးစွာ သကြားလက်ဖက်ရည် ၂ဇွန်းကို ခွက်တစ်ခုထဲ ထည့်ထားပါ ။ ထို့နောက် ခရမ်းချဉ်သီးတစ်လုံးကို … Read more
အနမ်းပေးခြင်းကနေရရှိမယ့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများ….
အိပ်နေတုန်းမှာ ရုတ်တရက် သိမ့်ခနဲ တုန်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်း …
အိပ်နေစဉ်အတွင်း အမြင့်တစ်ခုခုပေါ်ကပြုတ်ကျသလို၊ ချော်လဲသလိုမျိုးကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ဆတ်ခနဲတုန်တက်လာရတဲ့ ခံစားချက်မျိုးကို ကျွန်တော်တို့အားလုံး ကြုံဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမျိုးတွေခဏ၊ ခဏဖြစ်တာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အဖြေကို ဒီဆောင်းပါးလေးကနေတစ်ဆင့် စာဖတ်ပရိတ်တို့နားလည်သိရှိရအောင် ရှင်းပြပေးသွားပါ့မယ်။ တော်တော်များများက တစ်ခုခုနဲ့တိုက်မိသလို၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကရိုက်လိုက်သလိုမျိုးနဲ့ တစ်နေရာရာက ပြုတ်ကျသလိုမျိုးကြောင့် အိပ်နေရင်းဆတ်ခနဲ တုန်သွားတတ်ကြပေမဲ့ တချို့တလေကတော့ တစ်ယောက်ယောက်က တက်ဖိထားသလို၊ ညှစ်ထားသလိုမျိုးကြောင့် တုန်တတ်ကြပါတယ်။ သင်ဟာ ဒီလိုမျိုး မကြာခဏဖြစ်တတ်သူဆိုရင်တော့ ကဖင်းဓာတ်နဲ့ ဆေးလိပ်တွေသုံးစွဲခြင်းကို အမှန်တကယ်ကို လျော့ချသင့်ပါပြီ။ ဒါ့အပြင် ၎င်းဓာတ်နှစ်မျိုးဟာ သင့်ရဲ့အိပ်စက်မှုတွေကိုပါ ထိခိုက်လာစေနိုင်ပါတယ်။ အိုခေ ဒီလိုဆိုရင် ဘာကြောင့်အိပ်နေရင်းနဲ့ အမြင့်တစ်နေရာပေါ်ကနေ ပြုတ်ကျသလိုခံစားရတာလဲဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ဆီကို ပြန်သွားလိုက်ကြရအောင်ပါ။ ပင်ပန်းမှုတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေနဲ့ အိပ်စက်လိုက်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ကအိပ်စက်သွားပေမဲ့ ဦးနှောက်ကတော့ တကယ်တမ်းမအိပ်စက်သေးပါဘူး။ ဒီအချိန်မျိုးမှာ ဦးနှောက်က အိပ်စက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို နိုးထဖို့ အချက်ပြသတိပေးခြင်းပဲ … Read more